UK oo shaacisay in ay aad uga walaacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya
HomeWararka MaantaUK oo shaacisay in ay aad uga walaacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya
September 19, 2021 Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
UK ayaa sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay kor u kaca xiisadda siyaasadeed ee hadda ka jirta Soomaaliya, waxayna sheegtay khilaafka Farmaajo iyo Rooble inuu halis ku yahay inuu wiiqo kalsoonida hoggaamintooda.
Dowladda UK, waxay hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ugu baaqday in ay ka fogaadaan ficillada sii fogeyn kara xiisadaha siyaasadeed, oo ay ku jiraan warqadaha iskasoo horjeeda ee kasoo baxaya xafiisyadooda.
“Waxaan ku boorineynaa in dhammaan daneeyeyaasha ay ilaaliyaan nabadda si looga fogaado wax kasta oo khatar ku ah xasilloonida iyo amniga Soomaaliya. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in laamaha amniga ee Soomaaliya ay diiradda saaraan ka hortagga halista guud ee Al Shabaab, oo u taagan inay ka faa’iideystaan qalalaasaha siyaasadeed ee socda,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay UK.
UK waxay hoggaamiyeyaasha Soomaaliya markale ugu baaqday in mudnaanta lasiiyo doorashooyinka, sida lagu heshiiyay 27-kii May. Waxayna ka digtay guul -darrada joogtada ah ee ku yimaada doorashooyinka in ay sii xumayn karaan caqabadaha bani’aadamnimo ee daran ee dalku wajahayo.